How To - Myanmar Automobile and Equipment Directory
သင်္ကြန်ရက်အတွင်း ကားအတွင်းခန်းသို့ ရေဝင်လျှင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ????
ရောက်ရှိလာတော့မည့် သင်္ကြန်အခါသမယတွင် ရေပတ်ခံထွက်သော ကားများသည် အရှေ့ကားအခန်းကို မှန်လုံအောင်ပတ်ထားသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင်
ကားအတွင်း၌ ကားသော့ မေ့ကျန်ခဲ့လျှင် ပြုလုပ်သင့်သည့်အရာများနှင့် ရိုးရှင်းသော ကားထိန်းသိမ်းနည်း ငါးခု
ကားရှိသောလူတိုင်း ကြုံတွေ့ရတက်သော အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည့် ကားသော့ကို ကားအတွင်း၌ မေ့ကျန်နေတက်သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည့် စိတ်ရှုပ်ဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။
မိမိကား ရုတ်တရက်ထိုးရပ်လျှင် ပြုလုပ်ရမည့် အရာများ (Zawgyi – Unicode)
ကားမောင်းနေစဉ်အချိန်တွင် မမျှော်လင့်ဘဲ ကားစက်ထိုးရပ်သွားခြင်းမျိုးဖြစ်ပေါ်တက်ပါသည်။
Tuesday, 26 December 2017 16:32
ကားကို ဘယ်လို ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းမလဲ?(Zawgyi-Unicode)
မော်တော်ယာဉ်စတင်မောင်းနှင်မည့် ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် စတင်ဖြတ်သန်းရမည့် အချို့အချက်များအား ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချက်အလက်အားလုံးအပြည့်အစုံကိုက်ညီနိုင်မည် မဟုတ်သော်လည်း စာဖတ်သူများ ဗဟုသုတ ရစေလိုသဖြင့် ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားသောကားများ စက်ရပ်သွားပါက ပြုလုပ်သင့်သည့်အချက်များ (Zawgyi – Unicode)
ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးသည် ပထမ ဦးစားပေး အလုပ်ဖြစ်သည်။
Thursday, 16 November 2017 16:58
မော်တော်ယာဉ်များနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းများကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ????(Zawgyi-Unicode)
လူသားများအပါအ၀င် သက်ရှိများအားလုံးသည် ဤကမ္ဘာမြေတွင် အသက်ရှင် နေထိုင်ကြသည်။
Monday, 06 November 2017 15:34
မိမိကားအတွက် မှန်ကန်သော အောက်တိန်း ဓာတ်ဆီဘယ်လို ရွေးချယ်မလဲ????? (Zawgyi – Unicode)
အောက်တိန်း(Octane) ဆိုသည်မှာ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် (Hydrocarbon) နှင့်
Friday, 20 October 2017 17:13
ကားမောင်းနေစဉ် ဘရိတ်ချို့ယွင်းခဲ့ပါက လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက်များ(Zawgyi-Unicode)
ယာဉ်မောင်းနေစဉ် ဆင်ခြေလျှောလမ်းလိုအနေအထား ပစောက်ကွေ့၊ တံတောင်ဆစ်ချိုးကွေ့များဖြစ်နေသောအနေအထားမျိုးတွင်
Thursday, 12 October 2017 16:46
ကားတုန်ခါမှု ပြဿာများကို စစ်ဆေးခြင်း (Zawgyi – Unicode)
ကားမောင်း၍ ခရီးသွားနေစဉ် မိမိကားမှ ထူးခြားအသံနှင့်
Monday, 09 October 2017 16:22
ဖောင်းကြွ နံပါတ်ပြား တစ်ချပ် ၊ နှစ်ချပ်စလုံး ပျောက်ခဲ့ပါက ပြုလုပ်ရမည့်အချက်များ(Zawgyi-Unicode)
ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားတစ်ချပ် ပျောက်ဆုံးပါက ယာဉ်နှင့် တိုက်စစ်ပြီး ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း
ကားဘက်ထရီအားမရှိပါက ကားနှစ်စီးဘက်ထရီချိတ်ဆက်၍ စက်နှိုးခြင်း(Zawgyi-Unicode)
၁။ ကားနှစ်စီး၏ ဘက်ထရီရှိရာဘက်သို့ အဓိကထား၍ ခေါင်းချင်းဆိုင်ရပ်ပါ။
ကားမောင်းသည့်အခါတွင် မိမိကား၏ စတီယာရင်ချို့ယွင်းနေပါက လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များကို တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
?( (Zawgyi) မြန်မာနိုင်ငံကားလောကအပြောင်းအလဲကိုဝင်ရောက်လာတာ ခုမှ၃၊၄ နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။
Friday, 25 August 2017 16:52
ကားတစ်စီး၏ လေစစ်ဆိုတာသည်မှာ ဈေးလည်း သိပ်ပြီးမကြီးသလို ထိန်းသိမ်းပြုပြင် ရသည့်အပိုင်း မှာလည်း လွယ်ကူပါသည်။